Umthombo Ovulekile weGAFAM: Ama-Giant Technological asekela uMthombo Ovulekile | Kusuka kuLinux
Ukusetshenziswa kwe Ubuchwepheshe bamahhala novulekile nsuku zonke inweba kakhulu, hhayi kuphela phakathi kwabantu futhi izinhlangano zobuchwepheshe, kepha futhi phakathi Izinhlangano zomphakathi nezizimele, ngaphezu kwakho konke, phakathi kwezinhlangano eziningi ezizimele ezifanele emkhakheni wezobuchwepheshe womhlaba jikelele, ezinye zazo ezaziwa ngaphansi kwesifinyezo «GAFAM».
Okwalabo, okungenzeka ukuthi abayazi le ndaba «GAFAM», kokuthunyelwe kwangaphambilini, sikuchaze lokho ngokuyisisekelo «GAFAM» Kuyinto a isifinyezo kwakhiwa iziqalo ze «Gigantes Tecnológicos» ye-Inthanethi (iWebhu), okungukuthi, «Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft», nazo, okuyizinkampani ezinhlanu ezihamba phambili e-US, eziphethe imakethe yedijithali yomhlaba, futhi kwesinye isikhathi zibizwa nangokuthi i- Abakhulu Abahlanu (Abayisihlanu).
Ngenkathi sikwenye incwadi yangaphambilini siveze okulandelayo:
"Kulesi sikhathi samanje I-Fourth Industrial Revolution, i-Ecosystem ekhona yamathuluzi (Izicelo, Amasistimu Namapulatifomu) we «Software Libre y Abierto» uthanda ukwamukelwa kwe- «nuevas tecnologías», evumela Izinhlangano ukuthi zincintisane kakhulu futhi zinenzuzo kulezi zikhathi. Yize isici somuntu naso singukhiye, ikakhulukazi ezingeni lokuqeqeshwa nokuphathwa kwalawa mathuluzi."
Isizathu sokuthi kungani, kufanele sibheke ngaphezu kwanoma yikuphi ukwazisa komuntu njengento enhle, inqubo ekhulayo neqhubekayo yokwamukelwa nokusetshenziswa kwe Ubuchwepheshe bamahhala novulekile kuwo wonke amazinga nanganoma yimuphi umlingisi. Kodwa-ke, ukuze umuntu ngamunye abe nokwazisa okungcono ngalokhu, siphakamisa ekugcineni kokufunda le ncwadi ukuhlola lokhu okulandelayo okuthunyelwe okunconyiwe kwangaphambilini ngezansi ukuze wandise futhi uthuthukise owakho umbono ngakho.
1 Umthombo Ovulekile weGAFAM
1.1 Ukunyakaza Komthombo Ovulekile weGAFAM: Okwenzelwe noma Wokuphikisa Umthombo Ovulekile
1.2 Iminikelo ye-GAFAM Yokuvula Umthombo
Umthombo Ovulekile weGAFAM
Ukunyakaza Komthombo Ovulekile weGAFAM: Okwenzelwe noma Wokuphikisa Umthombo Ovulekile
Namuhla, zombili izinhlangano zikahulumeni nezizimele ziqhubekela phambili ngokuya ekuhlanganisweni okukhulu kwe- Isoftware yamahhala nomthombo ovulekile kweyakhe amamodeli webhizinisi, amapulatifomu, imikhiqizo kanye nezinsizakalo. Okungukuthi, i- ubuchwepheshe obukhululekile novulekile ziya ngokuya ziyingxenye ebalulekile yendlela yokusebenza nokungena kuzo, ukuze kuzuze abanikazi bazo, namakhasimende noma izakhamizi.
Okuningi kwalokhu ngokuvamile kubangelwa ukusetshenziswa kwe- ubuchwepheshe obukhululekile novulekile vumela ukusheshisa ukufuduka kanye nesikhathi sesimanje maqondana nefu nobunye ubuchwepheshe obusha, a izindleko ezifinyeleleka kalula, ngesikhathi esincane nangamazinga aphezulu obala kanye nokuphepha kwabo bonke labo abathintekayo.
Vele, hhayi sonke esivame ukubona ukusondela nokubandakanyeka kwezinhlangano zikahulumeni nezizimele, ikakhulukazi izinhlangano ze- Izidlakela Zobuchwepheshe (i-GAFAM) emkhakheni we Isoftware yamahhala, Umthombo Ovulekile kanye ne-GNU / Linux. Kepha umkhuba, futhi kufanele uqhubeke ngokuqhubekayo ubone i- imiphumela emihle nemibi yezenzo zabo nezenzo zabo.
Ngokwami ​​ngikubona njengo okuthile okuhle yize kusolisa, ngenxa yemicimbi eminingi esesidlangalaleni neyaziwayo engavamisile ukuthi ibe yinhle, ikakhulukazi leyo ehlobene nokusetshenziswa kabi kwedatha yethu kulimaza ubumfihlo, ukungaziwa kanye nokuphepha kwe-cyber, imvamisa.
Ngalesi sizathu, ngiyaphinda ngiyasho ukuthi ngamunye kufanele azakhele owakhe umbono ngakho, futhi okuthunyelwe kwangaphambilini okunconyiwe kuyisiqalo esihle sokwenza okukodwa.
Iminikelo ye-GAFAM Yokuvula Umthombo
Njengoba ukwazi ukubona kamuva kusixhumanisi ngasinye esinikelwayo, ifayili ngalinye le- Ama-Tech Giants lokho kuyingxenye ye- I-GAFAM, ine enhle kakhulu futhi ekhulayo Ikhathalogi yeSoftware evulekile kuwufanele ukuhlola:
Umthombo Ovulekile weGoogle
Umthombo ovulekile we-Apple
Umthombo Ovulekile We-Facebook
Umthombo Ovulekile we-Amazon
Umthombo Ovulekile WeMicrosoft
Note: Abaningi babo baneziza zabo ezisemthethweni kuzingxenyekazi ezifana neGitHub namabhulogi akhethekile mayelana nentuthuko yabo yoMthombo Ovulekile.
Ekugcineni, sincoma hlola okuthunyelwe okuhlobene oku-2 okulandelayo ngesihloko, ukuze baqhubeke nokwenza umbono wabo wokuthi kanjani Izinhlangano ezizimele zihlobana nomunye nomunye ne- Umthombo Ovulekile kanye nabo Imiphakathi (Abasebenzi / Abasebenzisi / Amaklayenti). Futhi uma lokhu kuhamba kuhamba kahle noma cha kweMiphakathi yasendle kanye nezinye izakhamizi zomhlaba.
Siyethemba lokhu "okuthunyelwe okuwusizo okuncane" cishe «GAFAM» nokuzibophezela kwayo kwi-Open Source Software, ukunyakaza okuthuthukayo nokwandayo okwamukelwa abaningi, abanye abanezinsolo nokungabaza, nabanye ngokwenqatshwa okuphelele, kuthakazelisa kakhulu futhi kuyasiza, kuyo yonke «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» kanye negalelo elikhulu ekusabalalisweni kwemvelo emangalisayo, enkulu futhi ekhulayo yezicelo ze «GNU/Linux».
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Izaziso » Umthombo Ovulekile weGAFAM: Ama-Giant Technological asekela uMthombo Ovulekile
ukuthi i-gafam isebenzisa futhi ikhuthaze umthombo ovulekile kufana nokufuna ukubukeka kahle nonkulunkulu kanye noDeveli, izinhlelo zokusebenza kumele ziqinisekise ubumfihlo nomthombo ovulekile awuhlangabezani njalo nalezo zidingo
Ukubingelela, MX2048. Ngiyavuma ngokuphelele, ngakho-ke ngokwami ​​ngikubona kuyinto enhle, noma ngisola.
Ngikubona kuyisu lokubeka amazinga ayo okuthi, ngokuba ngumnikazi, kungathatha isikhathi eside ukunwetshwa
Ngaphezu kokukhululwa, banethuba lokuba namashumi ezinkulungwane 'zabasebenzi' bokuyithuthukisa mahhala futhi banqobe
Ozithobayo, Nasher_87 (ARG). Siyabonga ngokuphawula kwakho nangeqhaza lakho odabeni.
Merlin Isangoma kusho
Ngifuna ukukhumbula isithembiso sikaSteve Jobs sokukhipha umthetho olandelwayo we-Facetime; Ngabe kukhona okubonile? Kuhle lokho ...
Ngiyabona kodwa ukuthi umzamo wokushicilela iSwift yi-Apple, ube yinto enhle, yize impela inentshisekelo.
I- "Big Five" inentshisekelo yokonga ama-duros ambalwa ngalokho okwenziwa abanye, kepha bengabelani ngezabo, kulula kanjalo.
Futhi iMicrosoft ibilokhu imayelana nokwamukela nokuchitha izindinganiso ukuze zibaphathe ngaphakathi.
Sanibonani, Merlin Isangoma. Siyabonga ngokuphawula kwakho nangeqhaza lakho odabeni.